फोनको आईपी६८ र आईपी६७ रेटिङको अर्थ के हो, थाहा पाउनुहोस् कुन राम्रो र किन - Technology Khabar
» ताजा समाचार » फोनको आईपी६८ र आईपी६७ रेटिङको अर्थ के हो, थाहा पाउनुहोस् कुन राम्रो र किन
फोनको आईपी६८ र आईपी६७ रेटिङको अर्थ के हो, थाहा पाउनुहोस् कुन राम्रो र किन
विश्वभर स्मार्टफोन निर्माताहरुका साथसाथै अन्य इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस उत्पादकहरुले आफ्ना फोनहरुलाई पानी तथा धुलो प्रतिरोधी बनाउने गरेका छन् । यसमा उनिहरुले विभिन्न मापदण्डहरु पालना गर्ने र त्यसैअनुसार स्तरमा फोनलाई पानी तथा धुलो प्रतिरोधी अर्थात वाटरप्रुफ तथा डस्टप्रुफ भनेर दाबी गर्ने गरेका छन् ।
यसको लागि विभिन्न मानक वा रेटिङ्गहरु प्रयोग गरिन्छ जसमा आईपी६८ र आईपी६७ धेरै प्रयोगमा आउने गरेको छ।
आईपी६८ र आईपी६७ को अर्थ: स्मार्टफोन निर्माताहरूले फोनमा आन्तरिक सुविधाहरूको साथसाथै भौतिक सुविधाहरू लगातार बढाउँदैछन्। यदि तपाईंले नयाँ स्मार्टफोन ल्याउनुभयो र टेबलमा राख्नुभयो । त्यसैबेला कसैले टेबलमा पानीको गिलास पोख्यो र तपाईंको फोन त्यसमा भिजेर बिग्रियो। यो धेरै खतरनाक हुनेछ। त्यसैले कम्पनीहरु अहिले फोनलाई वाटरप्रुफ र डस्ट प्रुफ बनाउनमा लागेका छन् ।
अहिले यो सुविधा आईफोन १३ प्रो, सामसङ ग्यालेक्सी एस२१ अल्ट्रा र नयाँ पिक्सेल ६ र पिक्सेल ६ प्रो जस्ता प्रिमियम फोनहरूमा उपलब्ध छ।
फोन वाटरप्रुफ र डस्ट प्रुफ भएकोमा रेटिङ दिइएको हुन्छ। केही फोनहरू पानीबाट पूर्णतया बचाउनु पर्छ। तपाईंले भर्खरै खरिद गर्नुभएको फोनको लागि, तपाईंले पानी-प्रतिरोधीका साथसाथै अहिले सामान्य आईपी६७, आईपी६८ वा आईपीएक्स ८ मूल्याङ्कनहरू जस्ता टर्महरू फेला पार्नुहुनेछ।
तर ती मूल्याङ्कनहरू वास्तवमै के हुन् र तपाईंको महँगो नयाँ फोन कत्तिको वाटरप्रूफ छ? हामी तपाईलाई यसको बारेमा पूर्ण जानकारी यहाँ दिइरहेका छौं।
आईपी, या इन्ग्रेस प्रोटेक्शन रेटिङ्ग (यसलाई अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा रेटिङ्गको रूपमा पनि चिनिन्छ), इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिसनद्वारा सेट गरिएको मानक हो। संगठनका अनुसार, कोडहरूलाई “विद्युतीय उपकरणहरूलाई प्रदान गरिएको सुरक्षाको डिग्री वर्गीकरण गर्ने प्रणाली” को रूपमा डिजाइन गरिएको हो।
रेटिङ कोडमा पहिलो नम्बरले औंला वा धुलो जस्ता ठोस वस्तुहरूको प्रवेश विरुद्ध प्रदान गरिएको सुरक्षाको डिग्रीलाई संकेत गर्छ। यी सुरक्षा स्तरहरू ० देखि ६ सम्मका हुन्छन्। दोस्रो नम्बरले ० देखि ८ सम्मको सुरक्षा स्तरहरू सहित, नरम वा तरल पदार्थको प्रवेश विरुद्ध सुरक्षाको डिग्रीलाई संकेत गर्दछ।
कहिलेकाहीँ तपाईले फरक किसिमको आईपी रेटिङ देख्नुहुनेछ जसमा एक्सद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको नम्बर, जस्तै आईपीएक्स८ हुन्छ। यस उदाहरणमा, कुनै कम्पनीले परीक्षण विवरणहरू प्रदान गरेन र त्यसैले मूल्याङ्कन नम्बरलाई एक्सद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ।
आईपीएक्स८ मूल्याङ्कन गरिएको उपकरण पानीमा डुबेर बाँच्न सक्छ, तर यसलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि धुलो सुरक्षाको लागि मूल्याङ्कन गरिएको हुँदैन्।
आईपी६८ र आईपी६७ रेटिङको अर्थ के हो ?
आईपी६८ रेटिङ भएका स्मार्टफोनले धुलो सहन सक्छ र आधा घण्टासम्म १.५ मिटर पानीमा डुब्न सक्छ। जहाँ आईपी६७ रेटिङको मतलब डिभाइस भित्र धुलो नपसोस र डिभाइसलाई आधा घण्टासम्म १ मिटर गहिरो पानीमा राख्न सकिन्छ।
यसरी तेस्रो पक्षीय किबोर्ड एपहरूले तपाईंको डाटा चोर्छन्, तिनीहरूको प्रयोग नगर्नुहोस्